Ukupholisa ukuNgenisa ii-Heating System-Post Heating System heating
Ikhaya / Iinkqubo zokuHuquka koMoya / Inkqubo yokuFudumeza umoya opholileyo
Inkqubo yokuHulelwa koMoya oKhulayo
Udidi: Iinkqubo zokuHuquka koMoya tags: Ukupholisa i-heater yokupholisa umoya, Ukupholisa ukufudumeza komoya, Inkqubo yokupholisa ukufudumeza komoya, ukupholisa umoya PWHT, ukufudumeza kombhobho wokufudumeza, ukuqulunqa ukupasa umbhobho, yokuqulunqa inkqubo, Inkqubo yokufudumeza imibhobho, I-welding yangaphambi kokungeniswa, ukufudumezela ukunyuka
Uluhlu lwe-MYD lwe Inkqubo yokuHulelwa koMoya oKhulayo zisetyenziselwa i-weld, ukugoba, ukuhambisa imibhobho, ukuphahla, ukuhambelana, uxinzelelo loxinzelelo, ubushushu be-weld yangaphambi kunye nonyango olushushu lwe-weld.
Ukupholisa umoya: ukusebenza kakuhle kwi-10 ℃ -40 ℃
Induction ukufudumeza amandla: Ukufudumeza umsebenzi nomsebenzi ngengubo yokugquma ngeenxa zonke kuwo. Isantya esiphezulu sokufudumeza kunye nokusebenza ngokufudumeza ngamandla amancinci alahlekileyo.
I-PLC ichukumisa isikrini: Intuitive ukubona kwaye kulula ukusebenza.
I-coil yo-induction elula: Kulula ukuphefumula ngomsebenzi ohlukeneyo.
Uluhlu olukhutshwayo Ukukhupha i-coil: kulula ukuyisebenzisa nokuhamba.
Umshini wokurekhoda: Ukurekhoda yonke i-curve curve.
Umlawuli weqondo lobushushu: Ukufudumeza ngokweenkcukacha zokufunwa kwe-± 3 ℃.
Ukufudumeza kuqala: Ukubhinqa, ukuguqa, ukulungeleka, ukungafaki, ukunyusa.
I-post-welding yonyango yonyango: iTanki, ibilisi okanye enye imisebenzi yensimbi
Ukufudumeza: Ukufudumeza ishidi lesinyithi, Ukufudumeza umngundo, i-shipboard, i-zinc bath, indawo enkulu kunye nengaqhelekanga
Ukufudumala kwepayipi: Ioli yombhobho, igesi yombhobho, umbhobho wamanzi, ipayipi ye-petrochemical kunye nezinye izinto zepayipi
Ukuboniswa kweDivayili kwaye ulungiselele iiparitha, njengamandla okuvelisa kunye nobushushu bokumisa.
Ukusebenza okuphezulu: Amandla kagesi aguqulwa ngokuthe ngqo kumbane wokushisa ngelahleko elingaphantsi kwamandla.
Isaziso sokusilela: Emva kokusebenza, i-alamu ezwakalayo isebenze kwaye ibhokisi yephuso iboniswe kwi-PLC yokuthinta isikrini.
Ukudibaniswa kweModyuli yeModyuli: Inkqubo yomelele kwaye ixabiso eliphantsi lokugcina.
I-Digital Recorder eneprinta yoshicileli iyakwazi ukurekhoda idatha yeqondo lokushisa kunye nokwenza imifanekiso yetshathi yenkqubela yokufudumala.
Ukulingana okuchanekileyo kwimobushushu: Amanqaku amaninzi ekufumaneni ubushushu; Iziteshi ze-6 zolawulo lokushisa kunye no-± 3 ° C ukunyamezela; Ukufudumeza.
I-Air Cool System ivumela inkqubo isebenze ngeyona ndlela: -30 º C ~ 50º C
I-IGBT Module: Sijonge i-IGBT ye-Technology.
Ukulawulwa kweMandla: Yonke imisebenzi iyinkqubo encinci kwaye ilawulwa nge-PLC touch screen.
Kulula ukufaka: Ukudibanisa ngokukhawuleza.
Kulula Ukuhamba: Ngokuphakamisa Ijhe okanye iStel System.
Khuselekile: Khusela ngokuzenzekelayo ukusilela kwamandla.
Umxhasi woMntu wonke: ubungqina bamanzi; Ukufakwa.
igalelo Power I-3 * 380VAC (Okungagqibekanga), 3 * 220VAC (Optional), 3 * 440VAC (Okukhethwa kukho)
Isiphumo soBume 2KHZ ~ 36KHz
Okwangoku Inkalo 60A 75A 90A 120A 150A 180A
ubunzima 130KG 136 KG 140 KG 145 KG 168 KG 180 KG
ubungakanani 800 * 560 * 1350mm
ukupakisha Ubungakanani 900 * 660 * 1560mm
I-MYD icandelo lokucoca compare nga xhatshazwa ubushushu:
Ukugcina amandla: 30-80%
Umshini wokuThengisa iPhezulu
Isifudumezi se-Electromagnetic Induction Heater 15KW Magnetic Heater
I-Intuction Preheat Welding System
I-Induction Preheat Welding Machine